Top 6 Health Uru Resveratrol Mmeju （Kachasị mbara comprehensive
Mbido > Ntinye Resveratrol
Y’oburu na ichoro ebe izu ahia Resveratrol ntụ ntụ na nnukwu, otu ụlọ ọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi na ntụkwasị obi maka ị nweta ihe ọkụkụ bụ Cofttek. Thelọ ọrụ ahụ, n'ihi ndị ọrụ nyocha siri ike na ngalaba ahịa raara onwe ha nye, eguzobewo ọnụnọ zuru ụwa ọnụ na obere oge - ọ nwere ndị ahịa na ndị mmekọ gburugburu ụwa. Resveratrol nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara na-abịa na nnukwu batches nke 25 kgs ma na-enweta site na ihe ndị kachasị mma, si otú ahụ na-achọpụta na mgbakwunye ndị e mepụtara site na ya nwere ike ịtụkwasị obi maka ogo na ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta resveratrol na nnukwu, naanị ebe ịzụ ahịa bụ cofttek.com.
Resveratrol (501-36-0) bụ polyphenolic compound nke a na-ahụ n'ọtụtụ osisi mana ọtụtụ na mkpụrụ vaịn. A na-akpọkarị Resveratrol 'stilbene' n'ihi nhazi ya ma ọ bụ stilbene kachasị ewu ewu. Stilbenes bụ ogige osisi ndị a na-ahụkarị na ezinụlọ grape n'agbanyeghị na ha nwere ike ịdị obere obere na osisi ndị ọzọ. N'ime mkpụrụ vaịn, resveratrol dị na akpụkpọ ahụ ma na-arụ ọrụ dị ka phytoalexin ma ọ bụ nsị ihe ọkụkụ, na-echebe mkpụrụ vaịn site na ọrịa dị iche iche.
Ruo ọtụtụ afọ, ndị France ekweghị eri nri ndị nwere abụba juputara na ya, na-emechu ndị na-eme nchọpụta ihere. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na resveratrol bụ azịza nke a 'French Paradox' nke Ọrịa Obi. Na eziokwu, mmanya uhie na-arụ obere ọrụ iji mee ka 'French Paradox' a nwee ike. Nri na ibi ndu bu ihe di nkpa.
Mba ndị a na-ahụ maka ị ofụ mmanya uhie, a na-ahụ ọnụ ọgụgụ mmadụ na-eri ihe ruru 0.2 mg nke resveratrol kwa ụbọchị. Agbanyeghị, n'ọtụtụ mba ebe anaghị amasị mmanya uhie dị ka ọ dị na Spain ma ọ bụ North America, ndị bi na ya anaghị enwe resveratrol. Ndị na-emepụta, gburugburu ụwa, na-abịa na mgbakwunye resveratrol nke na-ekwe nkwa ọtụtụ uru ahụike n'otu oge.
Ajụjụ bụ: resveratrol dị ka ihe na-emetụta ya dị ka mmeju a na-ekwu na ọ bụ? Ka anyị lelee ụfọdụ ihe resveratrol.
Gịnị kpatara anyị ji chọọ Resveratrol?
Red wine lowers cholesterol, eziokwu ọtụtụ n'ime anyị maara. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ n'ime anyị maara na ọ bụ osisi resveratrol na-enye mmanya ọ bụla na-acha uhie uhie ihe onwunwe a. A na-ahụ resveratrol n'akụkụ mmanya na-acha ọbara ọbara n'ọtụtụ nri ndị ọzọ. Resveratrol (501-36-0) bụ nke izizi kewapụrụ na 1939 na kemgbe ọtụtụ afọ, nyocha emere na ngalaba a gosipụtara uru dị iche iche ahụike ya, nke n'aka nke ya, butere ịrị elu na-achọ ụlọ a. Ndị ọzọ karịa na-agbada cholesterol, resveratrol makwaara iji mee ka arụ ọrụ uche na ịchịkwa ọbara mgbali.
N'okwu a zuru oke banyere resveratrol, anyị na-atụle uru ya, ojiji ya, yana usoro nchekwa yana ị na-adụ gị ọdụ na mgbakwunye resveratrol kacha mma nke 2021 yana ebe ịzụta ihe ọkụkụ a na nnukwu. Agbanyeghị, ka anyị buru ụzọ bido ụzọ.
Kedu uru nke resveratrol?
Na-ebelata Ọbara Ọbara
Na 2015, otu nnyocha kpughere na nnukwu ọgwụ resveratrol na-ebelata ọbara mgbali systolic nke anyị na-ahụ dị ka ọnụ ọgụgụ dị elu na ịgụ ọbara mgbali elu. A na-ahụta ọbara mgbali elu nke systolic dị ka ihe egwu maka ọdịmma nke mmadụ ka ọ na-eme ka ohere nke ọrịa obi na mmadụ dịkwuo elu. Resveratrol na-ebelata ọbara mgbali site na ịmịkwuo nitric oxide, nke, na-eme ka akwara ọbara ghara izu ike. Ọ bụ ezie na enwere ihe akaebe zuru oke na-egosi na resveratrol na-ebelata ọbara mgbali, ọ dị mkpa ka a mee nnyocha banyere usoro ọgwụgwọ ziri ezi. (1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos,
② Ama Ya Ka O Nwee Ahụ Ike Uche
Nnyocha ndị e mere ọtụtụ afọ egosiwo na ị wineụ mmanya na-acha uhie uhie na-eme ka ọ ghara ịda mbà na-adabere na afọ. Nke a bụ isi n'ihi resveratrol dị na mmanya na-acha ọbara ọbara. Resveratrol nwere mgbochi mkpali na mgbochi oxidant Njirimara na ọ na-egbochi ọrụ nke beta-amyloids, nke bụ maka mmalite nke Alzheimer.
Resveratrol Bara Uru Karịa Ndị Ọrịa Shuga
N'ime afọ ole na ole gara aga, e duzila ọtụtụ anụmanụ iji mụọ mmetụta resveratrol na ọrịa shuga. N'ime ụmụ anụmanụ, resveratrol na-abawanye nnabata insulin ma kwụsị ọrụ nke enzyme nke na-eme ka ọ gbanwee glucose na sorbitol. Sorbitol bụ shuga na-eduga na nrụgide oxidative ma na-ebute nsogbu na ndị nwere ọrịa shuga. Nke ahụ dị iche iche, ndị sayensị kwenyere na resveratrol na-arụ ọrụ AMPK, protein nke na-emetụta glucose, n'aka nke ya, na-ebelata ọkwa shuga n'ime ahụ.
④ Ọ Pụrụ Imebi mkpụrụ ndụ Ọrịa Cancer ma Mee Ka Ọ Dịkwuo Ndụ nke Ndị Mmadụ
Nchọpụta egosila na resveratrol nwere ike igbochi uto mkpụrụ ndụ kansa n’ime ahụ site na ịgbanwe mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ kansa. Nke kachasị mkpa, ọmụmụ anụmanụ egosipụtakwala na resveratrol na-egbochi mgbasa nke ọrịa cancer na-adabere n'ọbara site na otu esi egosipụta ụfọdụ homonụ.
N’otu aka ahu, ndu ikike nke resveratrol aburula isi okwu buru ibu nke ndi sayensi. N'ọtụtụ ọmụmụ anụmanụ, resveratrol kwalitere ndụ nke anụmanụ a họọrọ site na ịmegharị ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ndị a maara na-alụ ọgụ ma na-ezere ọrịa ndị metụtara afọ. Ndị ọkà mmụta sayensị na-atụ anya nsonaazụ yiri nke ahụ na mmadụ. Agbanyeghị, achọrọ nyocha.
Ọ bụ ọgwụgwọ dị irè maka ogbu na nkwonkwo na nkwonkwo mgbu
Resveratrol bụ ọgwụgwọ dị mma megide ma ọrịa ogbu na nkwonkwo na mgbu nkwonkwo. Ngwakọta a na-eme ka ihe ọkụkụ na-echebe ahụ pụọ na nkwonkwo na ọrịa ogbu na nkwonkwo site na ibelata uto nke ututu. Studiesfọdụ ọmụmụ anụmanụ egosipụtakwala na resveratrol na-echebe nkwonkwo site na ibelata mbufụt.
⑥ Ọ na-enye nchebe megide ọrịa obi
Resveratrol na - echebe obi n’obi ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Nnyocha ụmụ anụmanụ egosila na ogige a na-echebe ọrịa ndị ọrịa obi site na ịkwụsị ịrụ ọrụ nke enzyme a kapịrị ọnụ, nke a na-ejikọ na mmepụta cholesterol. Nke kachasị mkpa, ebe ọ bụ na resveratrol nwere ihe ndị na-egbochi antioxidant, ọ na-ebelata nzere nke LDL cholesterol, nke bụ isi maka nrụpụta mgbidi mgbidi.
Resveratrol ọ dị mma maka imeju gị?
O nyere nchebe imeju megide kemịkal, cholestatic, na mmerụ mmanya. Resveratrol nwere ike imeziwanye metabolism metabolism na profaịlụ lipid ma belata imeju fibrosis na steatosis. Ọzọkwa, ọ gbanwere hepatic cell ọdụdụ acid mejupụtara.
Kedu nri ndị siri ike na umeji?
Nri 6 iji zere ma ọ bụrụ na ị nwere imeju mara abụba
Mmanya na-egbu egbu bụ isi ihe na-akpata ọrịa araju araba yana ọrịa imeju ndị ọzọ.
Gbakwunye shuga. Zere iri nri dị ụtọ dịka swiiti, kuki, sodas, na ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi.
Nri e ghere eghe. Ndị a nwere abụba na calorie.
White achịcha, osikapa, na onyinye.
Kedụ ka m ga-esi mee ka imeju m sie ike?
13 tozọ na Healthy Imeju
Nọgide na-enwe ibu dị mma.
Rie nri kwesịrị ekwesị.
Na-emega ahụ mgbe niile.
Alcoholụbiga mmanya ókè.
Zere iji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Zere agịga e merụrụ emerụ.
Nweta nlekọta ahụike ma ọ bụrụ na ekpughepụrụ gị ọbara.
Ekekọrịtala ihe ọcha gị.
Omume mmekọahụ na-adịghị ize ndụ.
Sachaa aka gị.
Soro ntuziaka na ọgwụ niile.
Inye ọgwụ mgbochi.
Resveratrol ọ dị mma maka akụrụ?
Resveratrol nwere ike igbochi mmerụ ahụ, gụnyere ọrịa shuga nephropathy, mmerụ akụrụ na-akpata ọgwụ ọjọọ, mmerụ akụrụ na-akpata aldosterone, mmerụ ischemia-reperfusion, mmerụ akụrụ na-akpata sepsis, na akụrụ na-egbochi, site na mmetụta ya na-akpata antioxidant na ọrụ SIRT1.
Ahụekere bọta nwere resveratrol?
Ahụekere ahụekere dị mma maka ịkpụ apụl na celery, ma ọ nwekwara ụfọdụ resveratrol (ihe dị ka 13 mg kwa iko). Ahụekere bọn bụ nnukwu mmiri ọgwụ niacin na manganese.
Resveratrol na-enyere gị aka ịkwụsị ibu?
N'ozuzu ya, nyocha nke ugbu a gosipụtara na resveratrol oriri na-ebelata ịdị arọ, BMI, WC na abụba buru ibu, ma na-arịwanye elu na-arịwanye elu, ma ọ dịghị emetụta leptin na adiponectin ọkwa.
Kedu ihe Resveratrol na-eme n'ahụ?
Resveratrol nwere ike ịbanye n'ime mgbochi akpụkpọ ahụ n'ụzọ dị mfe ma jiri nwayọ belata usoro ịka nká nke anụ ahụ. Resveratrol nwekwara mgbochi mkpali, anti-microbial, na antioxidant Njirimara, si otú ahụ na-eme ka akpụkpọ gị gbasie ike na enweghị breakouts na mbufụt.
Kedu mmanya kacha nwee resveratrol?
A na-ejikọta Resveratrol na mkpụrụ vaịn na-acha ọbara ọbara na mmanya na-acha ọbara ọbara nke sitere na mkpụrụ vaịn. Mmanya dịka Malbec, Petite Sirah, St. Laurent na Pinot Noir nwere ọdịnaya resveratrol kachasị elu.
Ndi resveratrol na-eme ka ume di ike?
A kọwawo Resveratrol dị ka i mimomi mmachi caloric, na-eduga n'ịdị elu mmega ahụ na insulin na-enwe mmetụta (ịbawanye ume ike), yana inwe mmetụta nke abụba-na-eme ka ahụ belata site na igbochi adipogenesis, na ịba ụba mkpokọta lipid na anụ ahụ adipose
Resveratrol ọ na-ebelata ọbara mgbali?
Resveratrol na - agbatị ọbara mgbali elu site na ịmalite ịmalite ime ihe na-akpata protein, ọkachasị n'oge oge nrụgide oxidative, usoro nke nwere ike ịbụ akụkụ nkịtị nke mkpụrụ ndụ antioxidant.
Kedu nri ndị dị elu na resveratrol?
May nwere ike iriworị ezigbo ego nke resveratrol. A na-ahụ ya na nri dịka ahụekere, pistachios, mkpụrụ vaịn, mmanya na-acha ọbara ọbara na ọcha, acha anụnụ anụnụ, kranberị, na koko na ọchịchịrị chocolate. Mkpụrụ osisi ndị nri ndị a sitere na ya na-eme resveratrol iji lụso ọrịa fungal ọgụ, ụzarị ultraviolet, nrụgide na mmerụ ahụ.
Kedu nri nwere ọtụtụ quercetin?
Quercetin dị n'ụba na apụl, mmanụ a honeyụ, raspberries, eyịm, mkpụrụ vaịn na-acha ọbara ọbara, cherị, mkpụrụ osisi citrus, na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ime akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, ọdịnaya quercetin kachasị dị na yabasị. Agba bọlbụ na ụdị ahụ yiri ka ọ bụ ihe na-ekpebi maka quercetin ịta ụba na eyịm.
Ndi resveratrol na-abawanye testosterone?
Ndị nnyocha ahụ chọpụtara na ngụkọta nke testosterone gbadara site na 23.1 pasent n'etiti ụmụ nwanyị ndị natara mgbakwunye resveratrol. N'iji ya tụnyere, ọkwa testosterone mụbara 2.9 pasent na otu placebo.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - eri mkpụrụ vaịn kwa ụbọchị?
Nri dị mma nke mịrị amị na nri gị kwa ụbọchị nwere ike ịzọpụta gị site na ụkọ iron. Mkpụrụ vaịn ndị a mịrị amị dị obere na calorie ma na-atọ ụtọ nke ọma. Ha dịkwa n'ụrọ nke ukwuu, yabụ, na-enyere ahụ aka ịnwe afọ ojuju maka obere ọrụ.
You nwere ike ịmị resveratrol karịrị akarị?
Mgbe a na-ewere ya na ọgwụ ruo 1500 mg kwa ụbọchị ruo ọnwa 3, resveratrol bụ POSSIBLY SAFE. Ejirila ọgwụ dị elu ruo 2000-3000 mg kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu maka ọnwa 2-6. Otú ọ dị, usoro ọgwụ ndị a dị elu nke resveratrol nwere ike ịkpata nsogbu afọ.
Resveratrol dị obere testosterone?
Resveratrol na-ebelata ogo nke na-ekesa androgen precursors mana enweghị mmetụta na, testosterone, dihydrotestosterone, ọkwa PSA ma ọ bụ olu prostate.
Resveratrol Ọ Na-arụ Ọrụ?
Nnyocha ụfọdụ na-egosi na enwere ike ijikọ resveratrol na obere nsogbu nke mbufụt na ịkpụkọ ọbara, nke nwere ike belata ihe ize ndụ gị nke ọrịa obi. Mana nyocha ndị ọzọ ahụghị uru ọ bụla sitere na resveratrol na igbochi ọrịa obi.
Kedu ihe Resveratrol na-emere gị?
N'iji ya mee ihe, resveratrol na-enyere aka kpuchie elu akpụkpọ ahụ, na-akwụsị ma na-enyere aka ịjụ mmetụta gburugburu ebe obibi na-adịghị mma, ma na-eme ka ahụ ike gwụrụ. O nwekwara ezigbo ihe na-eme ka ahụ dị jụụ nke nwere ike inye aka belata ncha ọbara ọbara
Ego ole ka m nwere ike ị dailyụ kwa ụbọchị?
Ngwá ọgwụ resveratrol kwesịrị ekwesị dabere na ọrụ a na-ewere mgbakwunye ahụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbakwunye maka ọbara ọgbụgba na-achọ ka ndị mmadụ na-eri resveratrol na nso 250-500 mg ebe mgbe edere ya maka mgbochi aromatase, a na-edebekarị ihe dị ka 500 mg kwa ụbọchị.
A gwara ndị ahụike dị na-ewere resveratrol iji meziwanye ahụike obi ma ọ bụ welie ogologo ndụ ka ha debe usoro ha n'etiti 150-445 mg. Otú ọ dị, a gwara ndị na-arịa ọrịa ọ bụla ka ha debe ọgwụ ahụ dị ala na 5-10mg kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, hụ na ị gakwuru dọkịta gị tupu ịmalite ọgwụ ọ bụla
Resveratrol ọ na - eme ka akpụkpọ ahụ dị nro?
Na ihe omumu nke umu anumanu na ihe nlere anya, 1% resveratrol egosiputala iji belata pigmentation nke UV na-ebute mgbe etinyere ya na akpukpo aru. Ihe analogs resveratrol, RTA na RTG, gosikwara mmetụta mmetụ akpụkpọ anụ mmadụ na ọnwụnwa ahụike na nlebara anya anwale (04% RTA, 0.8% RTA na 0.4% RTG).
Kedu ka esi etinye resveratrol na ihu gị?
Green kwuru maka serums, tinye ya mgbe ị sachapụchara, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eji toner na usoro nlekọta anụ ahụ gị, mgbe ahụ ị ga-etinye ya mgbe usoro ahụ gasịrị. Ọ bụrụ na ị na-eji resveratrol na moisturizer, mgbe ahụ, ị ​​ga-etinye ya ozugbo ịsachachara na toning, ugboro abụọ kwa ụbọchị, ụtụtụ na mgbede.
Resveratrol ọ dị mma maka ihe otutu?
Ihe antioxidant a na-akpọ resveratrol dị na mkpụrụ vaịn na mmanya na-acha ọbara ọbara nwere ike inye aka kpochapụ ihe ojoo jọgburu onwe ya, nchọpụta ọhụrụ sitere na UCLA. Mgbe ndị na-eme nchọpụta tinyere antioxidant resveratrol na nje nke nje na-akpata acne, ha chọpụtara na ọ na-egbochi uto nke chin na-emepụta pimple maka ogologo oge.
CoQ10 ọ na-emebi akụrụ gị?
Mmetụta sitere na CoQ10 yiri ka ọ dị obere ma dị nwayọọ. Ha gụnyere afọ ọsịsa, ọgbụgbọ, na obi ilu. Ihe egwu. Ndị mmadụ na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala dịka nkụda obi, akụrụ ma ọ bụ nsogbu imeju, ma ọ bụ ọrịa shuga kwesịrị ịkpachara anya maka iji mgbakwunye a.
Kedu nri ndị nwere nnukwu resveratrol?
A na-ahụ ya na nri dịka ahụekere, pistachios, mkpụrụ vaịn, mmanya na-acha ọbara ọbara na ọcha, blueberries, cranberries, na koko na ọchịchịrị chocolate. Mkpụrụ osisi ndị nri ndị a sitere na ya na-eme resveratrol iji lụso ọrịa fungal ọgụ, ikuku ultraviolet, nrụgide na mmerụ ahụ.
Kedu vitamin ndị siri ike na akụrụ?
Abụba ndị nwere ike ịgbakwunye abụba (A, D, E na K) nwere ike iru n’ahụ gị, yabụ a ga-ezere ndị a belụsọ ma ndị dọkịta akụrụ gị edepụtarala ha. Vitamin A na-echegbu onwe ya karịsịa, dịka ọkwa na-egbu egbu nwere ike ịpụta na mgbakwunye kwa ụbọchị.
Kedu nri ndị na - enyere aka imezi akụrụ?
Ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
A na-ahụta Resveratrol na usoro onwa ruo 1500 mg kwa ụbọchị site na ọnụ. Agbanyeghị oge enwere ike ịgaghị ọnwa 3. Enwere ike ị doụ ọgwụ oke elu na oke 2000-3000 mg kwa ụbọchị mana amaara ha na-akpata nsogbu afọ.
Womenmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye nwa ara kwesịrị iwere ọgwụ resveratrol na obere obere. Agbanyeghị, ha kwesịrị ịnwale ma nweta ọgwụ ha chọrọ ka eweghachi ha sitere n'okike sitere, dịka mkpụrụ osisi grape na mmiri mkpụrụ vaịn. Ndị otu a ekwesịghị ị consumedụ mmanya.
Ndị mmadụ na-arịa ọrịa nkwarụ kwesịrị ịhapụ ịnọ na mmiri resveratrol ka ọ na-ebelata ịmịnye ọbara. N'otu aka ahụ, ndị mmadụ na-arịa ọrịa na-emetụta homonụ, dị ka ovarian, uterine, ma ọ bụ ọrịa cancer ara ga-ahapụrịrị mgbakwunye mmezi.
Malbec ọ dị mma maka obi gị?
Mkpụrụ vaịn Malbec nwere akpụkpọ anụ kachasị sie ike nke ụdị mmanya vaịn dị iche iche. Nke a pụtara na ha na-eburu antioxidants resveratrol nke bụ igodo nke obi na ahụike.
Resveratrol nwere ike ibute isi ọwụwa?
Anyị egosila na ọrụ resveratrol site na ime ka ọrụ vasodilator endothelial dịkwuo elu, nke mere ka ndị ọzọ kwuo na resveratrol na mmanya na-acha ọbara ọbara nwere ike ịbụ ihe kpatara migraine.
Kedu nsogbu ndị dị na ịnweta resveratrol?
Resveratrol apụtaghị na ọ ga-enwe nsonaazụ na obere oge (1.0 g). Ma ọ bụghị ya, na doses nke 2.5 g ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị, mmetụta ndị nwere ike ịpụta, dị ka ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa na ọrịa imeju na ndị ọrịa nwere ọrịa imeju na-egbu egbu
Kedu ihe resveratrol ji agwọ?
Enwere ike ịpụta na-ewu ewu nke resveratrol na ojiji dị iche iche nke ngwaahịa a. Ihe nri Resveratrol na-akwalite oke ibu n'ime ndị okenye, na-akwalitekwa ezigbo anụ ahụ. Resveratrol mmeju, mgbe ewere ya tupu mgbatị ahụ, na-abawanye uru metụtara mmega ahụ siri ike. Nchọpụta egosipụtakwala na Resveratrol na-ebelata glucose ọbara ma na-eme ka ọbara na-erugharị. Ọ na - eme ka insulin mara ma ọ bụ ya mere, a na - ewere ya ka ezigbo mgbakwunye maka ndị na - arịa ọrịa shuga. Ọ na - akwalite ahụike obi na mbelata triglycerides. N'ikpeazụ, ọ na-ebelata ọrụ nke mkpụrụ ndụ kansa ma bụrụ ọgwụgwọ dị mma megide ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọnya nkwonkwo.
Resveratrol ọ na - ebelata estrogen?
Egosiputara Resveratrol iji gbochie ngbasa nke ma obu ezigbo ubara ma obu ihe ojoo nke sel cancer ara na sel sistemu. Ọ na - eme dị ka agonist estrogen ma ọ bụ onye na - emegide ya dabere na ụdị sel, estrogen receptor isoform, na ọnụnọ nke estrogens dị egwu
Kedu ihe na-egosi na ihe adịghị akụrụ?
Mgbanwe ole ị na mamịrị.
Pee nke na-acha ụfụfụ, ọbara, na-achagharị, ma ọ bụ na agba aja aja.
Mgbu ka ị na-agba.
Mgbapu na ogwe aka gị, nkwojiaka, ụkwụ, nkwonkwo ụkwụ, gburugburu anya, ihu, ma ọ bụ afọ.
Legskwụ na-erughị ala n'oge ụra.
Nkwonkwo ma ọ bụ ọkpụkpụ mgbu.
Mgbu dị n’etiti azụ ebe akụrụ nọ.
Ike gwụrụ gị mgbe niile.
Enwere m ike iji residratrol na nsogbu thyroid?
Ihe data ndị a na-egosi na resveratrol bụ onye na-egbochi okwu NIS na ịrụ ọrụ na sel thyroid. Ọzọkwa, resveratrol na-egosi na ọ nwere ọrụ dị ka nsogbu nke thyroid, yabụ anyị na-atụ aro ịkpachara anya na ingestion nke nnukwu resveratrol.
Kedu ụdị resveratrol kachasị mma?
Mmanya na-acha ọbara ọbara dị elu nke resveratrol maka nri. Nke a bụ ekele maka oge nke mkpụrụ vaịn na-etinye na gbaa ụka iji mee mmanya mmanya uhie. Ọnụnọ Resveratrol na mmanya na-acha ọbara ọbara bụ otu ihe kpatara ị nwere ike ịnụ ka a na-ekwu dịka obi siri ike.
Ndi apụl nwere resveratrol?
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Washington State University gosipụtara na mkpụrụ vaịn, blakberị, raspberries, strawberries na apụl, bara ụba na resveratrol, na-ere abụba oke. Nke a bụ otu. Usoro ohuru iji gbochie ma gwọ oke ibu dị na antioxidant dị n'ọtụtụ mkpụrụ osisi: resveratrol.
Ebee ka m ga-azụta ntụ ntụ Resveratrol na nnukwu?
Na ndị mmadụ na-amatawanye uru nke resveratrol, ọchịchọ maka mgbakwunye resveratrol amụbaala nke ukwuu na ahịa. Nke a emeela ka ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ihe na-ese okwu n'etiti onwe ha iji mepụta ihe mgbakwunye dị elu iji jide òkè n'ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ahụike na-ezube ịbanye na ahịa mgbakwunye resveratrol, ị ga-ahụrịrị na ị na-enweta ntụ ntụ resveratrol kachasị mma. Gha ezigbo ihe bụ ihe mbụ ị ga - eme iji hụ na azụmaahịa ọ bụla na - aga nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga zụta resveratrol ntụ ntụ n'ọtụtụ, otu ụlọ ọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi na nzuzo maka ị nweta ihe ọkụkụ bụ Cofttek. Companylọ ọrụ ahụ, n'ihi ndị ọrụ nyocha siri ike na ngalaba ahịa raara onwe ha nye, eguzobewo ọnụnọ zuru ụwa ọnụ na obere oge - ọ nwere ndị ahịa na ndị mmekọ gburugburu ụwa. Resveratrol nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara na-abịa na nnukwu batches nke 25 kgs ma na-enweta site na ihe ndị kachasị mma, si otú ahụ na-achọpụta na mgbakwunye ndị mepụtara site na ya nwere ike ịtụkwasị obi maka ogo na ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta resveratrol na nnukwu, naanị ebe ịzụ ahịa bụ cofttek.com.
(1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos, María Marhuenda-Muñoz, Carolina E. Storniolo, Anna Tresserra-Rimbau, Anna Vallverdú-Queralt na Rosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) Mmetụta Ahụike nke Resveratrol: Ihe ndị sitere na Ọnwụnwa Ntinye Ọrụ mmadụ, Nri akuko.10 (12)
(2) Bahare Salehi, Abhay Prakash Mishra, Manisha Nigam, Bilge Sener, Mehtap Kilic, Mehdi Sharifi-Rad, Patrick Valere Tsouh Fokou, Natália Martins, na Javad Sharifi-Rad (2018) Resveratrol: Mma agha nwere ihu abụọ na uru ahụike. 6 (3).
(3) Adi Y. Berman, Rachel A. Motechin, Maia Y. Wiesenfeld & Marina K. Holz (2017) Ike ọgwụgwọ resveratrol: nyocha nke ọnwụnwa nke ụlọ ọgwụ, npj precision Oncology olu 1, nọmba edemede: 35 edn.
(5) Njem inyocha egt.
(6) Oleoylethanolamide (oea) - anwansi anwansi nke ndu gi.
(7) Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
(8) Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(9) Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo.
(10) Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(11) Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(12) Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13) Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc.
(14) Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn).